वायु प्रदुषणका कारण रुखलाई कुपोषण ! | गृहपृष्ठ
Home र यो पनि वायु प्रदुषणका कारण रुखलाई कुपोषण !
on: १२ असार २०७५, मंगलवार १७:३९ र यो पनि
वायु प्रदुषणका कारण रुखलाई कुपोषण !
पछिल्लो समय विश्वमा वायु प्रदुषण एक जटिल समस्याका रुपमा देखा परेको छ । यसले मानवजातिलाई के कस्तो तरिकाले प्रभावित पारिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा नभएको सायदै कोही होलान् । वायु प्रदुषणले मानिसलाई मात्रै नभई बोटविरुवालाई समेत प्रभावित पार्ने एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ ।
डिजल इञ्जिन, खेत र कारखानाबाट हुने प्रदुषणले रुख विरुवालाई कुपोषित बनाउने एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । प्रदुषणका कारण रुखविरुवालाई खाना खान सहयोग गर्ने फङ्गाई मार्ने बेलायतको इम्पेरियल कलेज र क्यू गार्डेन कलेजका अनुसन्धानकर्ताले गरेको अध्ययनले देखाएको हो । उनीहरुले २० ओटा यूरोपेली राष्ट्रका १ सय ३७ अ‍ोटा जङ्गल क्षेत्रमा भएका १३ हजार ओटा मोटोको नमूना परीक्षण गरेका थिए ।
पछिल्लो समय बेलायत तथा यूरोपेली क्षेत्रका रुखविरुवामा पातको रङ्ग परिवर्तन, पातको कमजोर वृद्घिजस्ता रोगका लक्षणहरु देखिएको थियो । वर्षाको पानीमा हुने टक्सिकको स्तरले पनि रुखविरुवाले महत्वपूर्ण तत्वको आदान प्रदान गर्ने ‘वुड–वाइड वेव’ नामक फङ्गल हाइवेलाई भत्काइदिने बताइएको छ । बेलायतका १५ देखि ९० प्रतिशतबीचका जङ्गल प्रदुषणका कारण प्रभावित बनेको पाइएको छ । वायु प्रदुषणले रुखको जरामा रहेको लाभदायी फङ्गाईलाई हानी पुर्‍याएर रुखविरुवामा कुपोषण निम्त्याएको देखिएको छ ।
माटोबाट नाइट्रोजन, फोस्फोरस र पोटासियमनस्ता पोषक तत्व सोस्न रुखको जरा माइकोर्हिजल फङ्गाईमा निर्भर छ । पछिल्लो अध्ययनले यूरोपेली क्षेत्रका रुखहरुमा कुपोषणको सङ्केत देखिएको अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ । रासस/सिन्हवा